Cazoo - Page 2 nke 4 - Gini mere na emeghị m ya mbụ?
Mgbe Ethereum banyere na ụgbụ isi na 2015, ọ kpalitere mmasị na obi ụtọ nke akụkụ buru ibu nke ụwa ndị mmepe, yana ndị na-etinye ego na ya. Ihe ha bu n'obi ...
Nọgide na-agụKedu ihe bụ Ethereum 2.0 na gịnị kpatara ya ji dị oke mkpa
Centralized usoro na centralization
Nkebi otu:Mụta cryptocurrencies
Echiche nke mkpokọta etiti na-ezo aka ikesa ike na ikike na nzukọ ma ọ bụ na ntanetị. Mgbe usoro dị n'etiti, ọ pụtara na usoro atụmatụ na ...
Nọgide na-agụCentralized usoro na centralization
Nkebi otu:Mụta cryptocurrencies/Ebumnuche nke Cryptocurrencies
A nonce na-ezo aka a ọnụ ọgụgụ ma ọ bụ uru na ike ga-eji naanị otu ugboro. A na-ejikarị eme ihe na nyocha nyocha na ọrụ mkpuchi hash.
Usoro enweghị ntụkwasị obi pụtara na ndị sonyere na ya adịghị mkpa ka ha mara ma ọ bụ tụkwasị ibe ha obi ma ọ bụ ndị ọzọ maka usoro ahụ iji rụọ ọrụ. Na gburugburu ebe obibi na-enweghị ...
Nọgide na-agụGịnị bụ netwọkụ enweghị ntụkwasị obi, na-enweghị mkpa ntụkwasị obi
Nkebi otu:Mụta cryptocurrencies/Netwọk ahụ
Amalitere na 2015, netwọk Ethereum bụ ngọngọ nke butere ụzọ n'iji smart contracts iji wuo ngwa mmemme, na-enweghị mkpa ntụkwasị obi - enweghị ntụkwasị obi - na ...
Nọgide na-agụKedu ihe bụ Ethereum?
Nkebi otu:Ịgba Cha Cha/Sorare
Sorare, usoro ihe ngọngọ nke anyị kwurula banyere ya n’isiokwu a, nke na-agbanwe egwuregwu bọọlụ fantasy, na-ekwuwapụta ugbu a na ọ na-akwado Boca Juniors. https://twitter.com/SorareHQ/status/1395348813267841028?s=20 Boca Juniors:…
Nọgide na-agụSorare banyere otu ọzọ, nnukwu Boca Juniors 🇦🇷
Ebe e si nweta foto: Yogendra Singh Dị ka ọ dị n'isiokwu na-ekwu banyere Binance na Africa, akụkọ ụwa nke na-amasị m: mba dị ebube nke India, nke gọọmentị ya anaghị ahụ ezigbo ...
Nọgide na-agụBinance na India: Gọọmentị India ga-atụle iwu nchịkwa cryptocurrency kama mmachibido iwu
Ebe e si nweta foto: Muhammadtaha Ibrahim Ma'aji M na-ekerịta akụkọ na-adọrọ mmasị, nke m gụrụ na punching.com. Ana m ele mba ndị ahụ onu oriri ha anaghị anabata nnwere onwe akụ na ụba, m na-ahụkwa na mgbochi ...
Nọgide na-agụBinance na Africa: Edere ịrị elu na ọnụọgụ nke ndị ọrụ Africa ọhụrụ
Nkebi otu:Ịgba Cha Cha
Sorare bụ egwuregwu egwuregwu fantasy na-agba ọsọ na Ethereum. Achọrọ m ide ahịrị ole ma ole ịghọta etu Sorare si arụ ọrụ, echem na obere ntuziaka ga-esi na ya pụta iji wuo ...
Nọgide na-agụOlee otu Sorare si arụ ọrụ, egwuregwu ụwa na-agba ọsọ na Ethereum
Ọ na-eme kwa afọ, Bitcoin Pizza Day! Maghị ihe ọ bụ? Ọ bụ ụbọchị ncheta afọ ahụ nke emere kemgbe, na Mee 18, 2010, otu nwoke nọ na ọgbakọ nwere ...
Nọgide na-agụPbọchị Pizza Pizza - Binance na-enye BTC Pizza $ 52.200
Ngwuputa ego nke a na-egwuputa ihe, nke a na-akpọ cryptocurrency mining, bụ usoro nke azụmahịa n'etiti ndị ọrụ na-enyocha ma tinye ya na akwụkwọ ndekọ ahụ, na nnukwu akwụkwọ ndekọ aha ọha, ...
Nọgide na-agụKedu ihe ọ pụtara m na cryptocurrencies na otu esi arụ ọrụ Ngwuputa
Teknụzụ nke na-akwado ụwa nke cryptocurrencies bụ blockcheni ama ama.Ihe ngọngọ ahụ na-enye onye ọrụ ọ bụla nke netwọkụ ohere iru nkwekọrịta na-enweghị ntụkwasị obi na ibe ya ...
Nọgide na-agụAkụkọ banyere Blockchain
← Ihe edemede kachasị ọhụrụ